A Tụrụ Ha Mkpọrọ na Dọminikan Ripọblik Maka na Ha Ekweghị Aba Amị | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
A Tụrụ Ha Mkpọrọ Maka na Ha Ekweghị Aba Amị
Onye a bụ Nwanna Enrique Glass. Ebe a ka a tụrụ ya mkpọrọ izu abụọ
N’abalị iri na itoolu n’ọnwa Jun afọ 1949, ụfọdụ ndị Dọminikan Ripọblik, bụ́ ndị gbara ọsọ ndụ, si n’ebe ha gbagara bịa na Dọminikan Ripọblik ka ha kwatuo Rafael Trujillo n’ọchịchị. Mbọ a ha gbara kụrụ afọ n’ala n’egbughị oge. Ma, Trujillo malitere ịtụ ma ndị jụrụ ịba amị ma ndị o weere ka ndị iro ya mkpọrọ. Ụfọdụ n’ime Ndịàmà Jehova mbụ a tụrụ mkpọrọ n’oge ahụ n’ihi na ha ekweghị aba amị bụ Nwanna León Glass, Nwanna Enrique Glass, Nwanna Rafael Glass, na ụmụnna ndị ha na Nwanna León na-arụkọ ọrụ.
Nwanna León kwuru, sị: “Ndị amị jidere mụ na ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ ma gbaa anyị ajụjụ. Mgbe ha yichara anyị egwu, ha hapụrụ anyị. Ma mgbe ụbọchị ole na ole gachara, ha kpọrọ anyị ọzọ ka anyị bịa banye amị. Otú ha si kpọọ anyị abụghị otú a na-esi akpọ ndị ọzọ. Mgbe anyị na-ekweghị eme ihe ha kwuru, ha tụrụ anyị mkpọrọ. Anyị hụrụ ụmụnna anọ ọzọ n’ụlọ mkpọrọ ahụ, abụọ n’ime ha bụ ụmụnne m. Mgbe anyị pụtara na mkpọrọ ahụ, ha tụkwara anyị mkpọrọ ọzọ. Ihe a ka ha mere anyị ugboro atọ. Ọ na-abụkwa anyị pụta taa, nọọ otu ụbọchị ma ọ bụ karịa, ha atụghachi anyị mkpọrọ. A bịa n’ụzọ mkpọrọ atọ ahụ a tụrụ anyị, anyị nọrọ ihe fọrọ obere ka o ruo afọ asaa. Anyị nọrọ afọ ise na mkpọrọ nke atọ.”
‘Ma mgbe a pịara anyị ihe, ma mgbe a kụrụ anyị isi égbè, anyị diri ya n’ihi na Jehova na-enye anyị ike anyị ji na-edi ya’
Ọnwụnwa dị iche iche bịaara ụmụnna anyị n’ụlọ mkpọrọ. Ndị mkpọrọ ibe ha na ndị na-eche ha nche na-akwa ha emo kwa ụbọchị. Onyeisi ndị na-eche ha nche n’ebe a tụburu ha mkpọrọ gwadịrị ha, sị: “Ndịàmà Jehova, mgbe ọ bụla unu ghọrọ ndịàmà Ekwensu, gwanụ m ka m kpọpụta unu.” Ma, ndị mmegide a enwelighị ike ime ka ụmụnna anyị kwụsị ife Jehova. Nwanna León kwuru ihe mere na ha emelighị ya. Ọ sịrị: ‘Jehova nọ na-enye anyị ike idi ihe ọ bụla a na-eme anyị. Ọ na-enyekwara anyị aka n’ihe niile. Ma mgbe a pịara anyị ihe, ma mgbe a kụrụ anyị isi égbè, anyị diri ya n’ihi na Jehova na-enye anyị ike anyị ji na-edi ya.’
A Machiri Ndịàmà Jehova Iwu
N’ebe niile na Dọminikan Ripọblik, ndị na-achọghị iji anya ahụ Ndịàmà Jehova mere ka mkpagbu a na-akpagbu ụmụnna anyị kakwuo njọ. N’agbanyeghị mkpagbu ndị a, n’ọnwa Mee afọ 1950, e nwere narị ndị nkwusa abụọ na iri atọ na asatọ na Dọminikan Ripọblik, nweekwa ndị ozi ala ọzọ na ya. Mmadụ iri abụọ na otu ná ndị nkwusa ahụ e nwere bụ ndị ọsụ ụzọ oge niile.
Ihe a bụ akwụkwọ akụkọ e ji maa ọkwa afọ ole a tụrụ ụmụnna anyị mkpọrọ n’ihi na ha ekweghị aba amị
N’oge ahụ, otu onye ọrụ gọọmenti degaara otu onye ọnụ na-eru n’okwu n’ọchịchị Dọminikan Ripọblik akwụkwọ banyere Ndịàmà Jehova. Ọ sịrị: “Ndịàmà Jehova ka na-ekwusasi ozi ọma ha ike n’ebe niile n’obodo a [ya bụ, Kiudad Trujilo].” Ọ sịkwara: “Dị ka m kwuru na mbụ, e kwesịrị ilebara Ndịàmà Jehova anya n’ihi na ozi ọma a ha na-ezi na-emegharị ọtụtụ ndị anya n’ihe ụfọdụ, nke ka nke, ndị nkịtị.”
Onye ọzọ nọ n’ọkwá ukwu na Dọminikan Ripọblik aha ya bụ J. Antonio Hungría, gwara Nwanna Brandt ka o detara ya akwụkwọ ozi. N’akwụkwọ ozi ahụ, ọ ga-akọwa ihe Ndịàmà Jehova kweere banyere ịba amị, ikele ọkọlọtọ, na ịtụ ụtụ isi. Nwanna Brandt degaara ya akwụkwọ ozi ahụ. O si n’akwụkwọ “Kwe Ka Chineke Buru Onye-Ezi-Okwu” nweta ihe o dere. N’agbanyeghị akwụkwọ ozi a e degaara Maazị Hungría, a machiri Ndịàmà Jehova ikwusa ozi ọma na Dọminikan Ripọblik. Ọ kpọrọ Nwanna Brandt ka ọ bịa n’ọfis ya ka ọ gụpụtara ya akwụkwọ gosiri na a machiela Ndịàmà Jehova izi ozi ọma na Dọminikan Ripọblik. Mgbe ọ gụchaara Nwanna Brandt akwụkwọ ozi a, Nwanna Brandt jụrụ ya ma ndị ozi ala ọzọ hà ga-ala. Ọ gwara ya na ha agaghị ala ma ọ bụrụhaala na ha ana-erube isi n’iwu obodo, kwụsịkwa izi ndị mmadụ ozi ọma. *
^ para. 1 Ọtụtụ izu tupu ndị ọchịchị amachie Ndịàmà Jehova iwu, ndị ụkọchukwu Chọọchị Katọlik dere elu na ala n’akwụkwọ akụkọ iji mebie aha anyị. Ha bokwara anyị ebubo na anyị na-arụrụ ndị ọchịchị kọmunist ọrụ.